Thenga i-Trenavar powder (4642-95-9) hplc = 98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / Abanye / Trenavar powder (4642-95-9)
SKU: 4642-95-9. Isigaba: Abanye
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugramu kuya ku-mass order ye-Trenavar powder (4642-95-9), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawulwa kwekhwalithi ehamba phambili.
Trenavar powder iyaziwa ngokuthi i-Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, kanye ne-Trendione futhi izikhathi ezingu-10 ezingaphezu kwe-androgenic kune-Testosterone. I-Trenavar iyi-prohormone egxile ku-17b-HSD1 ukwenza i-Trenbolone esebenzayo, okusho kanye kanye emzimbeni wakho i-Trenavar ukuguqula ibe yi-Trenbolone noma i-Tren.
I-Trenavar powder ividiyo
Trenavar powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Formula Yamamolekhula: C18H20O2
Umbala: I-powder ephuzi emhlophe noma ephuzi ephuzi
Umjikelezo we-Trenavar powder
Amagama Amakhemikhali: Estra-4,9,11-triene-3,17-dione
Amanye Amagama: I-Trendione, i-Trenabol, i-Tren Elite, i-T-Var 15 ne-Super Trenabol.RU-2065, i-Trenava rpowder, i-Trendione powder
Ukusetshenziswa kwe-Trenavar powder
I-Trenavar powder iyaziwa ngokuthi i-Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, kanye ne-Trendione futhi izikhathi ezingu-10 ezingaphezu kwe-androgenic kune-Testosterone. I-Trenavar i-powder eluhlaza yi-prohormone egxile ku-17b-HSD1 ukwenza i-Trenbolone esebenzayo, okusho kanye kanye emzimbeni wakho Trenavar powder oluhlaza oluguqulwa libe yi-Trenbolone aka Tren. Abasebenzisi be-Trenavar powder bathola amandla amakhulu kakhulu nokwanda. Abasebenzisi nabo babhekana nokulahlekelwa kwamafutha okusheshayo kanye nokwanda kwamathambo. I-Trenavar i-powder compound iye yathandwa kakhulu futhi idinga ngenxa yemiphumela yayo enamandla emigqeni emifushane. Ngempela yiyona engcono kunazo zonke zomhlaba uma ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ulahlekelwe kangakanani.
I-Trenavar i-powder eluhlaza, eyaziwa nangokuthi i-Trendione, i-prohormone yomlomo ehluke kwi-steroid trenbolone ejova kahle kuphela nge-ketone endaweni ye-17th. Ngakho-ke, ithela i-trenbolone esebenzayo emzimbeni, okwenza ibe yinkimbinkimbi enamandla kakhulu futhi enamandla kakhulu. Njengoba kufana kakhulu nokwakhiwa kwe-trenbolone, ngaphandle kokukhwehlela (okuvame ukubangelwa ukujova ngengozi), umsebenzisi kufanele athole imiphumela efanayo efana nokusebenzisa i-trenbolone engenayo.
Le prohormone ishesha-isenzo sokuthi abasebenzisi bangene ngemvume ukuthi bakwazi ukubona imiphumela ngemuva kwe-7 ezinsukwini ezingu-10 ngemuva kwesilinganiso sabo sokuqala se-Trenavar powder. Kodwa-ke, okuwukuphela komgqoko we-Trenavar powder oluhlaza kunganciphisa amazinga akho okukhuthazela jikelele, okungenza kube nzima ukuba uhlale isikhathi eside ngangokunokwenzeka uma uthatha imizimba ye-cardio.
Manje ngenkathi i-Trenavar powder ibhekwa njenge-prohormone eyingqayizivele, inokwabelana ngezinto eziningi ezifanayo ne-Trenbolone, i-steroid ejojayo nayo eningi abalandeli ezweni lomzimba. Lokho okuhlukanisa lezi ezimbili kusuka komunye nomunye yilokho okwakungokuqala kuphela iketone endaweni ye-17th ngaphandle kokugcina emakhimbeni awo amakhemikhali.
Iyini umthamo we-Trenavar powder
Abasebenzisi abaningi bahamba bezungeza i-30 kuya ku-45mg we-Trenavar powder nsuku zonke ngezinsuku ze-30 ezinokusekelwa komjikelezo. Kungcono ukuhlukanisa lesi sifo phezulu kwe-2 kuya ku-3 amasevisi we-15mg ngosuku.
Okokuqala, i-trendione kufanele ifakwe ku-50-70 milligrams (mg) ngosuku lomthamo wokuhlukaniswa uma igijima yodwa, futhi uma imiphumela emibi ingekho, umthamo unganyuswa kuze kube ngu-100mg esiphezulu. Asikho isidingo sokudlula leso sifo, futhi akufanele sisebenze isikhathi eside kunama-5 noma ama-6 amasonto.
Uma isetshenziselwa njengengxenye ye-stack, kunconywa ukuthi usebenzise i-trendione ukukhahlela umjikelezo, futhi umthamo omncane we-20-50mg ngosuku lokuhlukaniswa kwelanga kuyinani eliphelele. Abasebenzisi abaningi bakhetha ukufaka i-equipoise, i-testosterone, noma i-primobolan nayo. Ngaphezu kwalokho, abanye abasebenzisi ngisho bakhetha ukufaka i-trendione ne-deca durabolin, kodwa khumbula ukuthi ukufaka ama-progestin amabili kufanele kwenziwe kuphela ngabasebenzisi abanolwazi.
Uma usebenzisa i-trendione okokuqala, kufanele ugijime umlenze esincane ukuze ubone ukuthi usabela kanjani.
Indlela i-Trenavar powder isebenza ngayo
I-Trenavar i-powder eluhlaza isebenza ngokukhomba i-17b-HSD1 bese i-hydrogenates i-compound ukuze kuguqulwe ngaphakathi komzimba wakho ku-trenbolone. I-Trenbolone ne-Trenavar powder zifana kakhulu, empeleni zibelana ngezibopho ezimbili ezihlanganisiwe ze-3. I-Trenavar i-powder eluhlaza ihlukile uma ikhona ne-17 ketone. Njengomphumela abasebenzisi bafika ukuze bazwe cishe imiphumela efanayo abayoyenza ngokugijima umjikelezo we-trenbolone.
Abasebenzisi bathi ukunyuka okusheshayo emzimbeni wabo wamandla kanye namandla kuwo wonke amabhodi, kanti inzuzo iqala ukuba yenzeke ezinsukwini ze-7-10 ngemuva kwesilinganiso sokuqala. Ngemuva kwamaviki e-4-6, abasebenzisi abaningi abaqeqesha amandla bazosho ukuthi basondelene kakhulu, noma badlulile, amarekhodi abo emiphakathini yabo. Ngaphezu kwalokho, zibuye zibike ukuthi imisipha ibhebhetheka, amaphampu amakhulu ngesikhathi sokuqeqesha, nokunye okuningi.
Ngokuphathelene nesici sokukhuthazela, i-trendione iyisinqumo esimpofu, njengoba kuzokwenza ukuthi izinhloso zakho zokukhuthazela zikhubaze.
Ngaphandle kwezinzuzo ezifanayo, umzimba we-bodybuilders nawo uya ku-Trenavar powder ukuze kube lula ngokulandelana. Woza ukucabanga ngakho. Kungani uhamba ngezinkinga zokujova lapho ungathatha izinto ezifanayo ngomlomo? Ingasetshenziswa futhi njengeprohormone engezansi noma ingxenye yesiteji.
Le prohormone yiyona kuphela yinkimbinkimbi eqinisekisiwe eguqulwa ibe yi-Trenbolone uma ihlanganiswa ngomzimba. Manje ngenkathi kunenani le-Trenavar "ama-clones" aluhlaza ongawahamba, lawa empeleni aguqulwe abe yi-dienolone, ehluleka kakhulu uma eqhathaniswa.
I-Trenavar powder iyinto ehlukahlukene kakhulu futhi isetshenziswa kakhulu yizicathulo zomzimba ngesikhathi sokuncintisana nomncintiswano kanye nonyaka. Abasebenzisi abaningi abanolwazi balokhu umbiko weprohormone ukuthi le nhlanganisela inekhono lokugciniwe kuphela, kodwa futhi iphakethe ngobuningi obukhulu phakathi nalezi zikhathi lapho kuhlangene nokudla okuphansi kwekhalori.
Ukwengeza, i-Trenavar i-powder eluhlaza ayiguquki ku-estrogen futhi ngeke idale noma yimuphi umphumela we-estrogenic lapho uhamba ngebhayisikili. Kodwa-ke, kusadingeka ukuthi uthole imishanguzo efanele ye-post cycle noma i-PCT ehamba ngemva kokuhamba ngebhayisikili nale prohormone ukuvimbela noma yimiphi imiphumela emibi emibi.
Manje ngenkathi i-Trenavar i-powder eluhlaza ingaguquki ku-estrogen futhi ngeke idale imiphumela emibi ye-estrogenic, kubaluleke kakhulu ukuthi uthole imishanguzo efanele ye-post cycle noma i-PCT ehamba ngemva kokuhamba ngebhayisikili ngale prohormone. Njengoba i-Trenavar powder inamandla kakhulu, uzodinga i-PCT ukusiza izitho zakho ziphinde zisebenzise ngemuva kokucubungula le prohormone futhi zikhuthaze ukujwayelekile kwamazinga akho e-hormone.
I-Trenavar i-powder eluhlaza Marketing
Ukuze unikezwe esikhathini esizayo.RU-2065
Ingabe i-Trenavar powder Yinoma yimiphi imiphumela emibi
Ngokufanayo nanoma yikuphi umjikelezo weprohormone, abasebenzisi babone ukwanda kwegazi nomkhuhlane we-cholesterol ophakeme lapho kuhamba ngebhayisikili i-Trenavar powder. Ezimweni eziningi umfutho wegazi ophakeme ophakeme uphela ngemuva kokuba umjikelezo usuqedile futhi imiphumela yesibindi ingahle itholakale ngokufanele ekusekelweni komjikelezo kanye neTherapy Cycle Therapy. I-Trenavar powder ingaphinde ikhulise ukuhlukumeza futhi inciphise i-libido okwesikhashana. Izindaba ezinhle ukuthi i-Trenavar i-powder eluhlaza ayiphumuzi okusho ukuthi ngeke iguqulwe ku-Estrogen. Ngakho akudingeki ukhathazeke ngokuthuthukisa ama-Gobno aka Man boobs.
I-Trenavar powder ngokuvamile iyokwehlisa izinga lakho le-thyroid elibangela ukukhiqizwa kwe-Prolactin. Ukukhiqizwa kweprolactin ngokweqile kungaholela ekuzweleni, ukukhukhumeza, nokulahla endaweni yengono. Ukuze uvimbele lolu hlobo lwemiphumela emibi, sebenzisa i-prolactin inhibiter phakathi nomjikelezo wakho njengokungavimbela-P nge-SNS noma iPlactrone yi-Black Lion Research.
Labo abajwayelene ne "Tren Cough" akudingeki bakhathazeke ngalokho lapho uhamba ngebhayisikili Trenavar powder oluhlaza njengoba lokho kungumphumela ohlangothini lwezinjectjectables. Lokhu akusekho ukukhathazeka njengoba Trenavar imikhiqizo ye-powder eluhlaza ithathwa ngomlomo.
I-Trenavar powder nayo i-prohormone engeyona i-methylated okusho ukuthi akuyona into enzima emzimbeni, kodwa lokhu akusho ukuthi akufanele uthathe ukwesekwa komjikelezo. Ukusekelwa kwe-Cycle kuyadingeka nganoma yisiphi umjikelezo weprohormone.
Ngakolunye uhlangothi, imiphumela emibi elandelayo ibikwa ngabasebenzisi asebevele bahamba ngebhayisikili nge-Trenavar powder oluhlaza:
Kungabangela ukukhanda ikhanda nokwehliswa emilenzeni
Iyanciphisa amazinga we -roid
Kungabangela ukuphosa emazingeni kashukela egazini
Kunciphisa amazinga okukhuthazela
Kungabangela ama-surges ku-cholesterol embi namazinga wegazi
Kungabeka ukucindezeleka enhliziyweni nasesibindi
Kungabangela ukuhluleka kokulala, ukukhathala nokuphelelwa amandla
Nakuba kukhona amanye ama-akhawunti agcizelela i-Trenavar powder angabangela "ukukhwehlela kwe-Tren," lokhu akuyona into ongayisebenzisa uma usebenzisa le prohormone. Ungathola okufanayo uma usebenzisa i-Trenbolone engenayo
Indlela yokuthenga i-Trenavar powder kusuka ku-AASraw
Trenavar eluhlaza powder Ungadliwa
Ukuze uphenye ikhasimende lethu elimelelekile (CSR) ngemininingwane, ukuze uthole inkomba yakho